what, when, why: सगरमाथा भन्दा अग्लो
सगरमाथा भन्दा अग्लो
सन्देह: सुन न आकाश, संसारमा सगरमाथा भन्दा अग्लो के होला है ?
आकाश: ल, तिमिलाई त्यति पनि थाहा छैन ?
सन्देह: अँह ।
आकाश: त्यो त मान्छे नै हो नि ।
सन्देह: कसरी नि ?
आकाश: सगरमाथाको टुप्पामा मान्छे चडेपछि त्यो भन्दा अग्लो भएन त !